Translate Myanmar (Burmese) to Swedish | Multilang.space
translate Myanmar (Burmese) to Swedish, Myanmar (Burmese) to Swedish translations, Myanmar (Burmese) to Swedish Google Translate ,
မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား Hej hur mår du
မည်သူမဆိုရှိပါသလား? Är det någon?
ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ Jag älskar dig verkligen så mycket
ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ, Hur mycket kostar denna hamburgare?
သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား? Kan du ringa mig en taxi?
ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး jag är ledsen
တဆိတ်လောက် Ursäkta mig
ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို jag är intresserad
အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ Mitt flyg var försenat
ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို Jag är här för företag
မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည် Hej mitt namn är
ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို Jag är ledsen, men jag är gift
ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ် jag skulle vilja fråga dig
သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား? Kan du ta mig till flygplatsen?
ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ Vad är klockan just nu, snälla?
အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ? Var ligger närmaste polisstation?
ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား? Kan jag låna din telefonladdare tack?
ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား? Kan du hjälpa mig?
ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ? Beställ mig en drink, snälla?
ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ? Hur mycket kostar det?
ငါ gluten မှမတည့်ဘူး Jag är allergisk mot gluten
ဆရာဝန်ခေါ်ပါ Kontakta läkare
ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော Finns det en läkare?
ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား? Kan jag ringa?
ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။ Ring mig din chef tack.
ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည် Denna plats är mycket trevligt
ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ Ta mig till hotellet tack
အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ? Vad är mitt rumsnummer?